Iqela lokuhlela le-Creativos kwi-Intanethi | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Izidalwa ezikwi-Intanethi luluntu olukhulu kubo bonke Abathandi bokuyilwa kwegraphic, uyilo lwewebhu kunye nophuhliso kunye nobuchule bokuyila Ngokubanzi, indawo apho unokwabelana nomdla wakho kweli hlabathi linomdla nabantu abaphila ngokuthanda kwakho.
Ukuphuhlisa umxholo wethu, i-Creativos Online inefayile ye- Iqela langaphakathi labahleli beengcali kuyilo nophuhliso, Ngeminyaka eliqela yamava esebenza kwiinkampani kunye noyilo kunye nophuhliso iarhente kunye nemisebenzi ihlala inxulunyaniswa nomhlaba wobugcisa. Ndiyabulela kula mava, iwebhusayithi yethu ibonakala njengenye yezona zikumgangatho ophezulu kunye Umxholo ocace ngakumbi kwaye ungqongqo phakathi kwabo bonke abenza i-ecosystem yeewebhusayithi ezikhethekileyo zabayili kunye nobuchule bokuyila. Ukuba ufuna ukujonga zonke izihloko esijongana nazo kwiwebhu, ungayenza ngokulula ukungena kwicandelo lethu lecandelo.
Kwi-Creativos kwi-Intanethi sikhula rhoqo sikhangela iingcali ukuba zisincede sikhulise olu luntu ngokuvelisa umgangatho kunye nomxholo onomdla. Ukuba ufuna ukuba yinxalenye yeqela lethu lababhali Kufuneka ugcwalise le fomu ilandelayo Kwaye siya kunxibelelana nawe ngokukhawuleza.
Njengombhali nomhleli, uyilo yinxalenye yolwazi lwam, kuba kubalulekile ukuba imisebenzi ibonakale intle. Ndiyakuthanda ukwabelana ngolwazi endinalo kwintengiso kunye noyilo nabanye abanokulufuna.
Kum, uyilo lwegraphic soloko sisixhobo sokuguqula umbono wakho ube yinyani kwaye ubakhuthaze. Ngesi sizathu, ndifunde uyilo lwegraphic e-Escuela de Arte Superior de Diseño (EASD) eCastellón de la Plana, kwaye ngoku ndisebenza kwinto endiyithandayo: ukwenza iiprojekthi ezinxulumene nokufota kunye noyilo lwegraphic. Ngaba uyafuna ukufunda indlela yokuphucula iiprojekthi zakho? Ke sukuyeka ukufunda amanqaku am.
Ndifunde uYilo loMzobo kunye neNtengiso.Ndizibhengeza ukuba ndingumntu othanda iipowusta zemuvi zakudala, uyilo lokuchwetheza, kunye namabali ahlekisayo; Ndiyawuthanda umzekeliso kunye nokusetyenziswa okwenziwa ngeefonti zokuchwetheza.
Ukuthanda umzekeliso ngesimbo sam, ndinguMzekeliso ngezifundo eziqeqeshwe kwi-ESDIP kunye neDiploma Jikelele yeminyaka emithathu yeKhathuni, yoopopayi kunye noPhilayo. Ukuvumela ukucinga kwakho kubhabhe kwaye ufumane isiphumo endinethemba laso yinto endiyithandayo. Ndiyakonwabela ukuyila, kwaye nangakumbi ukuba ndinokwabelana ngayo.
Ndithanda ubugcisa kunye nobuchule bokuyila, ndingumyili wokunyanzelwa othanda ukwenza izindululo kunye nokuzama izisombululo ezitsha kwihlabathi loyilo loyilo. Ngesi sizathu, ndiyathanda ukuva izimvo kunye neengcebiso zabanye, kwaye ndikhuthazwe ziinkcukacha ezinokuba luncedo ekudaleni uyilo lwam.
Igama lam ndinguPablo Villalba Ndineminyaka engama-31 ubudala kwaye ndiyili / umculi. Ndithanda ubugcisa kunye noyilo, ndaqala izifundo zam kwilizwe lobugcisa kwiminyaka embalwa edlulileyo kwisikolo i-Pancho Lasso Art School, kulapha apho ndafumanisa ukuthanda kwam okwenyani kweli candelo. Ndiqhubeke nezifundo zam kwiDyunivesithi yaseLag Laguna apho ndifunde khona isiDanga soYilo. Ngoku ndifunda isidanga senkosi kuyilo nakwizinto ezintsha kwicandelo lokhenketho. Ukuthanda, ukuphumla, ukuyila kunye nokufuna ukufumana zonke ezo zimvo zithi qatha entlokweni yam.
Ndingumvelisi woVavanyo kunye neminyaka emininzi yamava kwicandelo kwaye ngaphezulu kweeprojekthi ezingama-50 ezenziwe ngeziphumo ezilungileyo. Ndiyathanda ukwabelana ngamava am ukuze sonke sifunde kunye, kuba ndiyakonwabela ukuyila imifanekiso kwaye ndiyenza ngakumbi xa abanye bethanda into endiyenzayo nam. Yenza ubuchule!
Ndingumyili wewebhu kunye noyilo loyilo, ke uyilo lwegraphic yinxalenye yokuba ndingubani. Ukuyonwabela bubizo bam, kangangokuba andithandabuzi nakancinci ukupapasha iiprojekthi zam ukuze nabani na oyifunayo, afunde nam.
Umfundi wezoNxibelelwano kunye noBudlelwane baMazwe ngaMazwe. Ngexesha lesidanga sam ndaba nomdla kunxibelelwano olubonakalayo kunye noyilo lwegraphic. Ukwazi ezona zixhobo ziphambili kuyilo kundincedile ukuxhaphaza ubuchule bam bokuyila kunye nokuziveza.Ndinethemba lokwabelana nawe kule blog ngento endiyifundileyo kule minyaka idlulileyo!
Ndiyingcali kwaye ndithandana noyilo loMzobo. Ndiyabuthanda ubugcisa, umzekeliso kunye nelizwe elibukelwayo. Ukuphupha, ukudala nokubona iprojekthi nganye iguquka yinto endiyithandayo kwaye indizalisa ngekratshi. Ukuba kuvela ingxaki, ndihlala ndikhangela isisombululo ukuze uyilo lokugqibela lufezeke.
Ndaqala ukufunda iGraphic Design ngokwenza umsebenzi, ndaye ndagqiba kwelokuba ndiwubhalise ngokusemthethweni ngokufumana isidanga soYilo lweGraphic kwisikolo esiphakamileyo soYilo eMurcia. Ekubeni ndikhumbula yonke into enxulumene nehlabathi lobugcisa, ubuchule kunye noyilo luye lwabamba ingqalelo yam. Bendisoloko ndinomdla kwaye ndinomdla wokufunda iindlela ezintsha, iinkqubo kunye noqeqesho.
Ndiyayithanda uyilo lwegraphic, ngakumbi i-glyph kunye noyilo lwe icon, kunye nokucofa iinkqubo zokuhlela ngexesha lam elisecaleni. Ukuzifundisa ngokwam, mihla le ndenza uphando ngeendlela ezintsha zokwenza iiprojekthi, kunye nokuphucula endisele ndizenzile, kwaye ndenza yonke into ndisebenzisa isoftware yasimahla, kuba zininzi iinkqubo zokusebenzisa simahla ezinokudala uyilo olumangalisayo.
UAntonio L. Carretero
Ndingumyili wemizobo, uMzobi kunye noMqeqeshi emsebenzini, ndiyayithanda i-Design kunye ne-Visual Art kunye nokusetyenziswa kwayo kwamanye amacandelo afana noYilo lweNtlalontle, intengiso, okanye imeko yenkcubeko epheleleyo. Ndiyathanda ukuzisa umhlaba woyilo kufutshane noluntu ngokubanzi, ukwazisa i-avant-garde abayili kunye nemiboniso ngalo lonke ixesha.
Umzobi wemizobo kunye nesidanga kwiJografi. Ndiqeqeshe njengomyili wemizobo ngokugqibezela isidanga esiphezulu kuyilo kunye nokuhlelwa kokupapashwa kunye nemultimedia eSalesianos de Sarriá (Barcelona). Ndiyakholelwa ukuba uqeqesho lwam kule ndawo alukapheli, ke ndiyaziqeqesha ndedwa ngokuthatha izifundo ze-intanethi kunye neendibano zocweyo zobuso nobuso. Kubalulekile ukuqeqesha yonke imihla kuba siphila kwihlabathi elitshintsha rhoqo apho itekhnoloji iguquka ngokuxhuma kunye nemida. Ukongeza kuyilo, ndiyathanda ukufota kunye nokwenza imodeli kwi-3D ukuze ndifumane ukunikezelwa kwe-photorealistic, indawo endizinikele kuyo ekufundeni ndedwa.
Ndigxininisa ekufotweni, kwividiyo nakwimifanekiso yohlengahlengiso. Ndiyakhathalela nomsebenzi wokuyila umzobo, kunye nokuveliswa komxholo kunye nokubonwayo, kwaye ndisebenzisa iAdobe Audition ukuhlela umculo, amazwi kunye nezandi. Ndiyakuthanda ukusebenzisana, ukwenza izinto ezintsha kunye nokuhlaziya, yiyo loo nto ndihlala ndizazi izinto ezintsha ezivelayo malunga nokuYilwa kweGraphic.
Ndingumyili wemizobo, kwaye ndinomdla wobugcisa bam, uyilo, ulawulo lwemibala kunye nalo lonke uluhlu lwamathuba okwenza kumaqonga ahlukeneyo. Kumava am ndisebenze ukusuka kubashicileli ukuya kwiiarhente zentengiso, kunye nabafoti, abaququzeleli bezentengiso kunye nenkonzo yabathengi ethe ngqo, ndiyinxalenye esebenzayo yenkqubo yoyilo kunye nemveliso. Njengobuchwephesha, ndiyaqhubeka nokwandisa ulwazi lwam kunye namava, kugxilwe kukugqwesa kunye nokwoneliseka kwabathengi.